Manenjika Ireo Piraty An’Aterineto I Okraina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Novambra 2016 4:41 GMT
Sary novain'i Isaac Webb
Nitranga nandritra ny fanambarana ny ezaka lehibe kokoa ataon'ny governemanta mba hanamafisana ny lalànan'ny famoronana ara-literatiora sy ara-javakanto ao Okraina, izay navoakan'ny mpandrindra tao amin'ny pejy fandraisan'ny tranonkala izany ary mba hanenjehana ireo piraty an'aterineto : nofidian'ny parlemanta ao amin'ny firenena vao haingana ny lalàna manana anarana hoe “ny Fanohanan'ny Fanjakana ny Fanatontosana Sarimihetsika” izay mamela ny tompon'ny zon'ny mpamorona hanakana ireo tranonkala mandika ny lalànan'ny zon'ny mpamorona tsy mila taratasy [didy] avy amin'ny fitsarana. Tamin'ny Talata, noraofin'ny polisy misahana ny serasera ao Okraina ny lohamilina an'ny FS.TO, tolotra fifampizarana rakikira malaza iray hafa.
Naorina tamin'ny 2009 ny EX.UA ary manome fahafahana ireo mpisera hamoaka sy hitroka votoaty ho an'ny lohamiliny maimaim-poana izay toerana malaza iseraseran'ny Okrainiana ihany koa (ahitana eo amin'ny roa ampahatelon'ny mpiseran'ny tranonkala) hitadiavana ireo sarimihetsika, hira, ary fitaovana nomerika hafa izay piraty avokoa. Araka ny Alexa , orinasa iray mitsongo dia ny haben'ny fifamoivoizana an'aterineto, ny EX.UA no tranonkala faha 11 malaza indrindra ao Okraina ary faha 1.636 malaza indrindra eto amin'izao tontolo izao.
Nilaza tamin'ny mpanao gazety i Dmytro Shymkiv, lehibe lefitry ny Fitantanan-draharahan'ny filoham-pirenena ho an'ny fanavaozana ny fitantanana, ara-tsosialy, ary ara-toekarena tamin'ny alakamisy fa faly noho ny fizoran'ny EX.UA mankany amin'ny ” lafiny mazava ” izy ary midika fahombiazana lehibe amin'ny ezak'i Okraina hiady amin'ny fanaovana piraty amin'ny aterineto ny fikatonany.
Manana maodelim-pihariana manome azy fahafahana ahazoana vola amin'ny alalan'ny fampielezana votoatinà lahatsary tsy ara-dalàna miaraka amin'ny dokambarotra Okrainiana ry zareo (EX.UA). Mandoa vola amin'ny dokambarotra ireo mpanao dokambarotra Okrainiana, fa tsy mahazo valin-kasasarana avy amin'izy ireo mihitsy ireo tompon'ny zon'ireo votoaty.
Mahazo vola mihoatra ny 1 tapitrisa dolara avy amin'ny tranonkala isan-taona ny tompon'ny EX.UA hoy Shymkiv .
Taorian'ny fandraofana ny lohamilin'ny FS.TO. [Hafatra ho an'ny EX.UA izany] Artem Afyan, mpisolovava ao amin'ny Justucum, orinasam-pisolovava misolo tena ny ex.ua no niteny tamin'ny tranonkalan'ny teknolojia AIN.ua fa nahatonga ny fanapahan-kevitra hanakatonana ny tolotra fifampizarana rakikira ny fiovana lehibe teo amin'ny lalànan'ny famoronana ara-literatiora sy ara-javakanto ao Okraina. Naneho ny ahiahiny amin'ny fiarovana ny tahirinkevitra sy ny fampahafantarana manokana izy, izay nangatahan'ny mpandrindra ny tranonkala tamin'ireo mpisera mba ho esorina alohan'ny 30 Novambra.
Manaiky ny servisy fa noho ny fifampihenjanana misy amin'izao fotoana izao eo amin'ny fiarahamonina, dia mety hitarika hetsi-panoherana maro ny fanerena ny fanakatonana [ny EX.UA], toy ny tamin'ny taona 2012. Tsy izany no ho setrin'ny hetsika hita mivaingana, fa ny fahafantarana fa mety hitarika fandrahonana amin'ny mombamomba ireo mpisera ny fihetsehana na tsy fihetsehana rahatrizay.
Nanoratra ireo mpandrindra ao amin'ny EX.UA fa nahazo fandrahonana mivantana izy ireo, anisan'izany ny fanaovana takalomindrana (chantage) sy ny fanafihana tamin'ny alalan'ny DDoS tamin'ny herintaona. Avy any ivelan'ny firenena ny sasany amin'ireo fandrahonana ireo, izay nolazainy fa “mahatonga ny angondrakitra mombamomba ny mpisera manokana izay voatahiry ao amin'ny tranonkala ho mora lasibatry ny hafa” . Mbola milaza hatrany ireo mpandrindra ao amin'ny taratasy ho an'ny mpisera fa tsy nandika ny lalàna izy ireo ary nanao ny fanakatonana mba hanarahana hatrany ny lalàna: ” tsy handao amin'ny fanajany ny lalàna Okrainiana ny EX.UA, ary nanapan-kevitra ny hikatona izy noho izany. “
Tsy vao voalohany izao no nikasa hanenjika ny EX.UA ny governemanta. Nitsena fanoherana masiaka avy amin'ireo mpikatroka an'aterineto sy ny mpisovoka izay nanafika ny tranonkalan'ny governemanta andro vitsy taorian'ny nanokafan'ny Minisiteran'ny Atitany fanadihadiana momba ny heloka bevava tamin'ny asan'ny EX.UA sy nisavany ny biraony ny ezak'ireo manampahefana mba hanakatonana ny tranonkala tamin'ny taona 2012 . Voatery nihemotra ihany anefa ny governemanta tamin'ny farany tamin'izany fotoana izany.
Eny tokoa, mety tsy hanaiky hikatona mora foana ny EX.UA. Nanohitra ny ezaky ny governemanta ny mpiseraseran'ny tranonkala tamin'ny taona 2012 amin'ny ampahany noho ny fomba fijery fa ireo eo amin'ny fitondrana no tena mpanao heloka bevava; tsy manaiky ny lalànan'ny famoronanana ara-literatiora sy ara-kolontsaina napetraky ny “andiana mpangalatra ” izy ireo. Tsy mazava tsara raha hitsahatra maharitra ny EX.UA amin'ny fitohizan'ny fihenan'ny fatokisana ny governemanta Okrainiana hatrany, indrindra taorian'ny fihitaran'ny kolikolim-panjakana izay naharihary tao amin'ny fanambaran'ny mpiasam-panjakana misahana ny (renivola) elektronika tamin'ny fiandohan'ity volana ity .
Na dia teo aza ny vaovao ratsy ho an'ny mpiseran'ny EX.UA , dia nanoratra ny mpandrindra ny tranonkala fa “ny aizimbe indrindra no aloha kelin'ny mangiran-dratsy,” ary izay vanim-potoanan'ny fanaovana piraty “tsy voafehy” no mety hanamafy ny maha zava-dehibe ny famelana ny mpisera hiditra amin'ny fitaovana ara-dalàna. Azo vakiana eto ambany ny fanambarana feno navoaka tao amin'ny pejy fandraisan'ny EX.UA .
Ny hafatra navoakan'ny mpandrindra ny ex.ua tao amin'ny pejy fandraisana tamin'ny alarobia.